Brunei Second Minister of Foreign affaires and Trade Erywan Yusof
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာစီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် Erywan Yusof ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂါနေ့မှာ လာရောက်ဖို့ရှိပေမယ့် အစီအစဉ်ပျက်သွားခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ အာစီယံကိုယ်စားလှယ်လာရောက်မယ့်အစီစဉ်ပျက် သွားတာမဟုတ်ဘဲ ရက်ရွှေ့ဆိုင်းတာသာ ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာစီယံ ဘက်ကတော့ ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူး။ အခုလို အာစီယံကိုယ်စာလှယ် လာရောက်မယ့်အစီစဉ်ပျက်သွားတာဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို အရေးပါတဲ့ခေါင်းဆောင် နဲ့တွေ့ ခွင့်မရလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ပြောဆိုမှုတွေရှိပါတယ်။ အခုလို စီစဉ်ပျက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားတဲ့ ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့ရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဒေါ်ခင်ဥမ္မာကတော့ အခုလိုသုံးသပ် ပြောဆိုပါတယ်။
ဒေါ်ခင်ဥမ္မာ။ ။ အများဆုံးဖြစ်နိုင်ချေကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ခွင့်မရလို့ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ နောက်တခုက အာစီယံ Special Envoy အနေနဲ့ သူရဲ့ တာဝန်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရကိုက သူက အာစီယံ သဘောတူညီချက် ၅ ချက်ကို အကောင်ထည်ဖော်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒီအထဲမှာ အဓိက ပွိုင့်တခုက ဘာပါနေလဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြပ်အတည်းတွေကို ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတာပါတာကို ။ ဆိုတော့ သူအနေနဲ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့နဲ့တွေ့ခွင့်မရပဲနဲ့ သွားရင်တော့ သူကို မြန်မာပြည်သူတွေကကော ဘယ်လောက်အထိ Warnning ပေးထားလဲဆိုတာ သူသိတယ်လေ။ အားလုံးကလည်း အစည်းဝေးတွေမှာလည်း ပြောထားတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ဖို့ မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့ သူမြင်တယ်။ စစ်ကောင်စီဖက်က တွေ့ခွင့်မပေးရင်တော့ သူသွားတာဟာ စစ်ကောင်စီကို နိုင်ငံရေးအရ အသိအမှတ်ပြုရမယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်လို့မရလို့ နောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။
အာစီယံကိုယ်စားလှယ်ဘက်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့တွေဆုံခွင့်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တွေ့ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလို့ငြင်းပါတယ်ထားပါတယ်။ အမှုရင်ဆိုင်နေ ရတဲ့အတွက် တွေ့ခွင့်ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြီးခဲ့လကုန်ပိုင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခု မှာပြောဆိုခဲ့ သလို။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က မီအိနိချိ သတင်းစာက အာစီယံကိုယ်စားလှယ်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ ခွင့်ပေးမလား လို့မေးတာကိုတော့၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်တယောက်၊ ၀န်ကြီးတယောက်ကို တခြားနိုင်ငံက တွေ့ခွင့်တောင်းရင် ဂျပန်အစိုးရကရောပေးမှာလားလို့ ပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ အရှေ့တောင်အာရှအသင်း အာစီယံအနေနဲ့ အဓိက၀င်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့
အာဆီယံ အနေနဲ့ တကယ်တမ်းထိထိရောက်ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ တာဝန်ယူထားတာမျိုးဆိုရင် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လည်း နစ်နာတယ်လို့ ဒေါ်ခင်ဥမ္မာကမြင်ပါတယ်။
ဒေါ်ခင်ဥမ္မာ ။.။ အဲဒီမှာပဲ စိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်နေတာ။ တကယ်တန်းတာ အာစီယံက သူရဲလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း မြန်မာနိုင်ငံအကြပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် သူမှာလုပ်နိုင်စွမ်း ဝန်ခံလိုက်ဖို့လိုတယ်။ အခုသူက ဝန်မခံပဲနဲ့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကပါ သူကို ရှေ့တန်းကတင်ပြီးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စကို သူက မလုပ်နိုင်တာဝန်မခံပဲနဲ့ ဆက်တိုးနေရင် သူဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်တယ်။ သူဂုဏ်သိက္ခာထက် ကျမတို့ပြည်သူတွေနစ်နာတယ်။ ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေမရပ်ရင် နစ်နာမှုတွေပိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ တကယ်တန်း ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးးကောင်စီကို သေသေချာချာ သူတို့ဖက်က ထုတ်ပြောလိုက်တော့ အာစီယံအနေနဲ့ မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးရဲ့ ဦးဆောင်ဖြန်ဖြေမှုနဲ့ အတူတူလက်တွဲလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ပဲ ကျမတော့မြင်ပါတယ်။
အာဆီယံအသင်း နဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ မြန်မာစစ်ကောင်စီအတွက်ရောဘယ်လောက်အရေးပါပါသလဲ။ အာစီယံဟာ ထိထိရောက်ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်လေ့မရှိတာ၊ အားလုံးသဘောတူမှလုပ်လို့ရတာ၊ စတဲ့ အားနည်းချက်တွေကြောင့် စစ်ကောင်စီက အရေးမလုပ်ဘဲတင်းခံနေမလား။ ဒီလိုတင်းခံနေရင် ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းက ဖိအားပေးဝိုင်းပယ်ထားတဲ့ စစ်ကောင်စီဟာ အာဆီယံလို ဒေသဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပါအဆင်မပြေဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းဝိုင်းရဲ့ဘေးကိုပိုရောက် သွားမလား စတဲ့မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်။
ဒေါ်ခင်ဥမ္မာ။. ။ အာစီယံက သူတို့ကို ဘေးဖယ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ အာစီယံမှာ သူတို့ရဲ့ ကတိကဝတ်ကို သူတို့ကိုယ်တိုင်က မစောင့်ထိန်း မလိုက်နာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘေးရောက်အောင်လုပ်တယ်လို့ပဲကျမမြင်တယ်။ သူတို့ဒီအတိုင်းဆက်ပြီး ခေါင်းမာနေတယ်ဆိုရင် ပြည်သူကလည်း အလျှော့မပေးဘူးဆိုတာရှင်းနေပြီနော်။ ဆိုးကျိုးတွေက သူတို့ဆီကိုလည်း လာမှာ။ အခုဆိုရင် သူတို့ကို ပစ်မှတ်ထားအရေးယူမယ် နည်းလမ်းတွေ တခြားနည်းနာတွေ ။ ဥပဒေကြောင်းအရ စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့အရေးယူမယ်ဟာတွေ ဒါတွေက အများကြီးထပ်လာမှာ။ သူတို့ဆက်တင်းခံနေရင် ကျမတို့ ပြည်သူတွေအတွက် နစ်နာဖို့ဆိုတာတင်မကပဲ သူတို့ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုလည်း နစ်နာတော့မှာပေါ့နော်။
ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့ရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဒေါ်ခင်ဥမ္မာပြောဆိုသွားတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့အပေါ်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကတော့လက်ခံခြင်းမ ရှိပါဘူး။ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေရပ်တန့်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်မှုတွေကိုပြန်လည် လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက် လိုက်လျောမှုတွေရှိမလာရင် အာစီယံ အထူးကိုယ်စားလှယ်နေနဲ့ ဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုတော့ အာစီယံ အသင်းက လောလောဆယ်ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အာစီယံအထူးကိုယျစားလှယျ Erywan Yusof ဟာ မွနျမာနိုငျငံကို အင်ျဂါနမှေ့ာ လာရောကျဖို့ရှိပမေယျ့ အစီအစဉျပကျြသှားခဲ့ပါတယျ။ စဈကကောငျစီတာဝနျရှိသူတှကေတော့ အာစီယံကိုယျစားလှယျလာရောကျမယျ့အစီစဉျပကျြ သှားတာမဟုတျဘဲ ရကျရှဆေို့ငျးတာသာ ဖွဈကွောငျးပွောဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အာစီယံ ဘကျကတော့ ရကျရှဆေို့ငျးလိုကျတယျလို့ ထုတျပွနျခွငျးမရှိပါဘူး။ အခုလို အာစီယံကိုယျစာလှယျ လာရောကျမယျ့အစီစဉျပကျြသှားတာဟာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျလို အရေးပါတဲ့ခေါငျးဆောငျ နဲ့တှေ့ ခှငျ့မရလို့ဖွဈနိုငျတယျလို့ သုံးသပျပွောဆိုမှုတှရှေိပါတယျ။ အခုလို စီစဉျပကျြသှားတာနဲ့ပတျသကျပွီး မွနျမာ့အရေးလှုပျရှားတဲ့ ရှပွေ့ေးအသံအဖှဲ့ရဲ့ ဘုတျအဖှဲ့ဥက်ကဌ ဒျေါခငျဥမ်မာကတော့ အခုလိုသုံးသပျ ပွောဆိုပါတယျ။
ဒျေါခငျဥမ်မာ။ ။ အမြားဆုံးဖွဈနိုငျခကြေတော့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ နဲ့ တှခှေ့ငျ့မရလို့ဖွဈဖို့မြားပါတယျ။ နောကျတခုက အာစီယံ Special Envoy အနနေဲ့ သူရဲ့ တာဝနျနဲ့ လုပျပိုငျခှငျ့အရကိုက သူက အာစီယံ သဘောတူညီခကျြ ၅ ခကျြကို အကောငျထညျဖျောရမှာဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ အဲဒီအထဲမှာ အဓိက ပှိုငျ့တခုက ဘာပါနလေဲဆိုတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အကွပျအတညျးတှကေို ဖွရှေငျးမယျဆိုရငျ သကျဆိုငျသူအားလုံးနဲ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရမယျဆိုတာပါတာကို ။ ဆိုတော့ သူအနနေဲ့က ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ တို့နဲ့တှခှေ့ငျ့မရပဲနဲ့ သှားရငျတော့ သူကို မွနျမာပွညျသူတှကေကော ဘယျလောကျအထိ Warnning ပေးထားလဲဆိုတာ သူသိတယျလေ။ အားလုံးကလညျး အစညျးဝေးတှမှောလညျး ပွောထားတော့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ နဲ့ တှဖေို့ မဖွဈမနလေုပျရမယျလို့ သူမွငျတယျ။ စဈကောငျစီဖကျက တှခှေ့ငျ့မပေးရငျတော့ သူသှားတာဟာ စဈကောငျစီကို နိုငျငံရေးအရ အသိအမှတျပွုရမယျဆိုတာမြိုးလုပျလို့မရလို့ နောကျပွနျဆုတျသှားတယျထငျပါတယျ။
အာစီယံကိုယျစားလှယျဘကျတော့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ နဲ့တှဆေုံခှငျ့တောငျးဆိုထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စဈကောငျစီဘကျကတော့တှခှေ့ငျ့မပေးနိုငျဘူးလို့ငွငျးပါတယျထားပါတယျ။ အမှုရငျဆိုငျနေ ရတဲ့အတှကျ တှခှေ့ငျ့ပေးဖို့မဖွဈနိုငျဘူးလို့ ပွီးခဲ့လကုနျပိုငျးကသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတခု မှာပွောဆိုခဲ့ သလို။ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျက မီအိနိခြိ သတငျးစာက အာစီယံကိုယျစားလှယျကိုဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့တှေ့ ခှငျ့ပေးမလား လို့မေးတာကိုတော့၊ ဂပြနျနိုငျငံမှာ အမှုရငျဆိုငျနရေတဲ့ ဝနျကွီးခြုပျတယောကျ၊ ဝနျကွီးတယောကျကို တခွားနိုငျငံက တှခှေ့ငျ့တောငျးရငျ ဂပြနျအစိုးရကရောပေးမှာလားလို့ ပွနျလညျမေးခှနျးထုတျတုနျ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈတပျကအာဏာသိမျးပွီးနောကျ ဖွဈပျေါလာတဲ့ ပွဿနာတှကေိုဖွရှေငျးဖို့ အရှတေ့ောငျအာရှအသငျး အာစီယံအနနေဲ့ အဓိကဝငျရောကျ ဆောငျရှကျပေးဖို့
အာဆီယံ အနနေဲ့ တကယျတမျးထိထိရောကျဝငျရောကျဆောငျရှကျနိုငျခွငျးမရှိဘဲ တာဝနျယူထားတာမြိုးဆိုရငျ မွနျမာပွညျသူတှအေတှကျလညျး နဈနာတယျလို့ ဒျေါခငျဥမ်မာကမွငျပါတယျ။
ဒျေါခငျဥမ်မာ ။. ။ အဲဒီမှာပဲ စိနျချေါခကျြဖွဈနတော။ တကယျတနျးတာ အာစီယံက သူရဲလုပျကိုငျနိုငျစှမျး မွနျမာနိုငျငံအကွပျအတညျးကို ဖွရှေငျးဖို့အတှကျ သူမှာလုပျနိုငျစှမျး ဝနျခံလိုကျဖို့လိုတယျ။ အခုသူက ဝနျမခံပဲနဲ့ ကုလသမဂ်ဂနဲ့ နိုငျငံတကာအစိုးရတှကေပါ သူကို ရှတေ့နျးကတငျပွီးလုပျနတေဲ့ကိစ်စကို သူက မလုပျနိုငျတာဝနျမခံပဲနဲ့ ဆကျတိုးနရေငျ သူဂုဏျသိက်ခာထိခိုကျတယျ။ သူဂုဏျသိက်ခာထကျ ကမြတို့ပွညျသူတှနေဈနာတယျ။ ဒီအကွမျးဖကျမှုတှမေရပျရငျ နဈနာမှုတှပေိုဖွဈတယျဆိုတော့ တကယျတနျး ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးးကောငျစီကို သသေခြောခြာ သူတို့ဖကျက ထုတျပွောလိုကျတော့ အာစီယံအနနေဲ့ မဖွရှေငျးနိုငျဘူးဆိုတဲ့ကိစ်စကို ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီနဲ့ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူးရဲ့ ဦးဆောငျဖွနျဖွမှေုနဲ့ အတူတူလကျတှဲလုပျမယျဆိုတာမြိုးနဲ့ပဲ ကမြတော့မွငျပါတယျ။
အာဆီယံအသငျး နဲ့ဆကျဆံရေးဟာ မွနျမာစဈကောငျစီအတှကျရောဘယျလောကျအရေးပါပါသလဲ။ အာစီယံဟာ ထိထိရောကျဝငျရောကျဆောငျရှကျလမေ့ရှိတာ၊ အားလုံးသဘောတူမှလုပျလို့ရတာ၊ စတဲ့ အားနညျးခကျြတှကွေောငျ့ စဈကောငျစီက အရေးမလုပျဘဲတငျးခံနမေလား။ ဒီလိုတငျးခံနရေငျ ကုလသမဂ်ဂနဲ့ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျးက ဖိအားပေးဝိုငျးပယျထားတဲ့ စဈကောငျစီဟာ အာဆီယံလို ဒသေဆိုငျရာ ဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးနဲ့ပါအဆငျမပွဖွေဈပွီး နိုငျငံတကာအသိုငျးဝိုငျးရဲ့ဘေးကိုပိုရောကျ သှားမလား စတဲ့မေးခှနျးတှရှေိပါတယျ။
ဒျေါခငျဥမ်မာ။. ။ အာစီယံက သူတို့ကို ဘေးဖယျတာမဟုတျဘူးပေါ့နျော။ အာစီယံမှာ သူတို့ရဲ့ ကတိကဝတျကို သူတို့ကိုယျတိုငျက မစောငျ့ထိနျး မလိုကျနာနိုငျတာဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဘေးရောကျအောငျလုပျတယျလို့ပဲကမြမွငျတယျ။ သူတို့ဒီအတိုငျးဆကျပွီး ခေါငျးမာနတေယျဆိုရငျ ပွညျသူကလညျး အလြှော့မပေးဘူးဆိုတာရှငျးနပွေီနျော။ ဆိုးကြိုးတှကေ သူတို့ဆီကိုလညျး လာမှာ။ အခုဆိုရငျ သူတို့ကို ပဈမှတျထားအရေးယူမယျ နညျးလမျးတှေ တခွားနညျးနာတှေ ။ ဥပဒကွေောငျးအရ စီးပှားရေးအရ ပိတျဆို့အရေးယူမယျဟာတှေ ဒါတှကေ အမြားကွီးထပျလာမှာ။ သူတို့ဆကျတငျးခံနရေငျ ကမြတို့ ပွညျသူတှအေတှကျ နဈနာဖို့ဆိုတာတငျမကပဲ သူတို့ရဲ့ အကြိုးစီးပှားကိုလညျး နဈနာတော့မှာပေါ့နျော။
ရှပွေ့ေးအသံအဖှဲ့ရဲ့ ဘုတျအဖှဲ့ဥက်ကဌ ဒျေါခငျဥမ်မာပွောဆိုသှားတာပါ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈတပျကအာဏာသိမျးထားတဲ့အပျေါနိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျးကတော့လကျခံခွငျးမ ရှိပါဘူး။ အကွမျးဖကျသတျဖွတျဖမျးဆီးမှုတှရေပျတနျ့ပွီး၊ ဒီမိုကရစေီဖျေါဆောငျမှုတှကေိုပွနျလညျ လုပျဆောငျဖို့ တိုကျတှနျးထားပါတယျ။ မွနျမာစဈကောငျစီဘကျ လိုကျလြောမှုတှရှေိမလာရငျ အာစီယံ အထူးကိုယျစားလှယျနနေဲ့ ဘယျလိုဆကျလကျဆောငျရှကျမယျဆိုတာမြိုးကိုတော့ အာစီယံ အသငျးက လောလောဆယျထုတျပွနျကွငွောထားခွငျးမရှိသေးပါဘူး။
အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ တွေ့ဖို့ အစီအစဉ်ပျက်